Handball: feno 55 taona ny AS St Michel | NewsMada
Handball: feno 55 taona ny AS St Michel
1963 – 2018! Feno 55 taona, amin’ity, ny ekipan’ny masindahy Misely (ASSM) Amparibe, taranja handball. Hanamarika izany tsingerintaona izany ireo mpitantana klioba izay tsy hamela izany handalo fotsiny. Araka izany, hisy hetsika maroloko entina hanamarihana izany. Toy ny mahazatra, hisy ny lamesa, hanokafana izany, arahin’ny fampisehoana an-tsary sy soratra ireo fotoana nolalovan’ny klioba, hatao etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Tsy hadino ny fiarahana misakafo sy ny alim-pandihizana, hanasana ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka ary ireo mpanohana ny ASSM, hatramin’izay.
Ankoatra ireo rehetra ireo, hisy koa ny fifaninanana fanatanjahantena, santarina amin’ny lalao iraisam-pirenena, ho an’ny sokajy zandriny. Fihaonana, hotontosaina etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, manomboka ny talata 31 jolay hatramin’ny zoma 3 aogositra ho avy izao.
Anisan’ireo firenena efa namaly ny antso fa ho avy handray anjara ry zareo Mahorey, handefa ekipa lahy sy vavy, eo amin’ny sokajy U15. Raha ho an’ny eto an-toerana, hifaninana amin’izany ny ASSM, ny Ascaf, ny Mon école. Eo amin’ny vehivavy indray, anisan’ireo handray anjara ny HBCA, ny HBCD, ary ry zareo avy any Bongolava. Tsy ho diso anjara amin’izany fifaninanana izany koa ny sokajy “senior” ka anisan’ireo hifaninana ny ASSM, ny Sporting ary ny St Michel Itaosy, miampy ny ekipam-pirenena U20. Tsiahivina fa niara-teraka tamin’ny federasiona ny ASSM. Hatreto aloha, ity ekipan’Amparibe ity irery ny hany mbola mijoro ankehitriny sy naharitra indrindra eto Madagasikara. Porofon’izany, in-23 izy no nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara. Saika avy amin’ny ASSM avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, ankoatra ireo efa lasa any ivelany toa an’i Frantsa, Etazonia, La Réunion, Maorisy sy ny sisa.